Kugara-Pamba Kubika: Sandals Resorts uye Beaches Chakavanzika Recipe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Culinary » Kugara-Pamba Kubika: Sandals Resorts uye Beaches Chakavanzika Recipe
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dai 7, 2020
Chikafu chiri pamoyo pezvinhu zvakawanda muhupenyu, uye kufamba hakuna kusiiwa. Sezvo vazhinji vekunze vekudyara vaizoziva, tsika nemagariro chikafu zvine zvakawanda zvekuita nekwauri kuenda kwaunosarudza kushanyira, uye mune izvo, iyo Caribbean haizonyadzise. Munguva dzazvino dzatiri kurarama nadzo nemirairo yekugara-pamba, vazhinji vedu tiri kubika zvakanyanya kana kuwana kutsva kutsva. Kusvikira tasvika kunzvimbo dzatinoda kushanyirwazve, heino nzira kubva Sandals Resorts uye Beaches kubatsira kugadzira iyo inonaka yekudyira ruzivo mukicheni yako wega.
Zvese zvinwiwa zveCaribbean zvinouya pamwechete pano paThe Reef Terrace ine zvisingaenzaniswi maonero aunogona kunakidzwa paSandals Ochi.
Ndichiri muCaribbean, inozivikanwa nejecha rayo, gungwa, zuva uye kunakidzwa, mikana yakakwira kuti iwe uwane chikafu chisingaenzaniswi. Kunyanya apo iwe unoshanyira chero yeayo mazhinji nyika, uchitarisana neyakajeka tsika, iyo inosiyana kubva kuchitsuwa kuenda kuchitsuwa.
Kana zvasvika pakufamba kwekudya, zviwi zvakaita seJamaica zvinomira zvakasiyana zvezvinhu zviripo zvekuyedza. Pamusoro pechinyorwa pane zvinhu zvakaita sejerk huku, Jamaican patties, yakakangwa mbudzi, shrimp rundown, nezvimwe.
Nezvinangwa zvechinyorwa chino, isu ticha zero mune shrimp rundown, inosarudzika coconut-mukaka wakavakirwa dhishi, iyo inodhura kwazvo muJamaica. Rundown inogona zvakare kushumirwa pamwe chete nezvimwe zvegungwa maini senge mackerel uye saumoni. Vamwe vanhu zvakare vanosarudza kubika yavo rundown muto nehuku, kwechinhu chidiki chakasiyana.
Yedu 5-Star Global Gourmet ™ chirongwa chinotora vashanyi kuburikidza nerwendo rwekugadzirira kutenderera pasirese nemakumi maviri nesere akasarudzika ekugadzirira mazano uye anodarika 21 maresitorendi munzvimbo dzese dzeSandals Resorts- ese akabatanidzwa, ese asina muganho.
Kana iwe uchiri kuyedza shrimp rundown, kana iwe uri kuronga kuyedza imwe panguva yako inotevera yese-inosanganisirwa nzvimbo yekuzorora muJamaica, iwe wauya kunzvimbo chaipo - nekugutsikana kudiki, isu takakwanisa kuwana Glenroy Walker , Senior Executive Chef paSandals Resorts kuti agovane nzira yake yeiyo yakakwana shrimp rundown!
Zvamunoda kuti ushandire saizi ye4
Mufananidzo nerubatsiro rwaPaul_Brighton / Shutterstock.com
1-pound shrimp (peeled & kubviswa)
3 maspuni bhotela
1 hanyanisi hanyanisi, yakachekwa
3 madzinde scallion, akachekwa
Pepper Scotch Bonnet mhiripiri, yakachekwa (sarudzo)
1 teaspoon itsva thyme
6 makapu kokonati mukaka
1 mukombe wakachekwa madomasi
½ mukombe julienned bhero mhiripiri
1 kapu yakachekwa manhanga
Mufananidzo unofanirwa neEcuadorpostales / Shutterstock.com
Muchikwata chepakati pepakati pepakati-yakanyanya kupisa, sungai bhotela uye sungai shrimp, hanyanisi, scallion, gariki, Scotch Bonnet mhiripiri uye thyme kusvikira hanyanisi yanyorova.
Bvisa shrimp chete uye chengetedza. Wedzera mukaka wekokonati uye hafu yetomatisi, uuye kumota, udzikise kupisa kusvika pakati uye rega simmer kusvika yadzikiswa kusvika pamakapu matatu emvura.
Wedzera bhero pepper uye simmer kusvikira mukaka wekokonati uwedzere uye uvapfeke. Wedzera shrimp kudzoka musanganiswa uye gadzirira kweminiti imwe kuti upise. Chinja kurunga nemunyu uye allspice kuravira, uye shanda nemupunga chena wakanyoroveswa, kana starch yaunofarira.
Rundown ndeimwe yeaya madhishi akagadzirwa muJamaica ayo akawana mukurumbira nekuda kwekukwanisa kwayo uye kuravira kunoshamisa. Nhasi kune zvakawanda zvakasiyana, imwe neimwe inonaka kupfuura inotevera. Kana iwe uri munzira yako yekugadzira iyo yekupedzisira shrimp rundown, ziva kuti nekufamba kwenguva iwe unozokwanisa kugadzirisa iyi recipe - iwe unogona kutowedzera ako wega zvigadzirwa zvekubata zvakasarudzika zvekugara kwako-kumba-kubika kamwe iwe ' Ndakaita iyo yekubheka ive yako.
Nakidzwa nemahombekombe machena uye matenga ebhuruu mune yakanaka Jamaica's Sandals Montego Bay.
Kana kune rimwe divi, iwe ukaedza kugadzira chimwe chinhu chinonaka pamusoro pechitofu chinopisa uye wosiya yako yekubika chikamu chisina kufemerwa kupfuura pawakatanga, shinga - pane nguva dzose sarudzo yeCaribbean yose-inosanganisira zororo kwaunogona kunakidzwa risingagumi gourmet dining, izvo zvinosanganisira zvine hunyanzvi zvakabikwa shrimp rundown! Ndichiri kuzorora muCaribbean uye kutora runyararo runyararo, panongova pasina chimwe chinhu chiri nani kupfuura icho! Icho chingori chikamu chemufaro wekugara-pamba kubika.